अण्डाको मूल्यमा सुधार आएपनि कृषकले लागत मूल्य अझै पाएनन्
रासस , २४ असार २०७६, मंगलवार, १२:०२ pm
पछिल्लो समय कृषकले चल्ला राख्नसमेत छाडेका थिए । यसबाट अण्डा उत्पादनमा क्रमशः गिरावट हुँदै जाने अनुमान गरिएको छ । सङ्घका केन्द्रीय सचिव मदन पोखरेलले अण्डाको मागअनुसार आपूर्ति हुन कठिन भएकाले क्रमशः मूल्यवृद्धि हुँदै जाने अनुमान गरिएको बताएका छन् । तीन वर्षअघि अण्डाको मूल्य बढेर प्रतिक्रेट रु ३६० पुगेको थियो । गत एक वर्षयता भने खर्च नधान्ने गरी मूल्यमा गिरावट आएको कृषकको भनाइ छ ।
कुखुराजन्य उत्पादन बिक्री नहुँदा कृषक चिन्तामा, बर्डफ्लु, लागत र उत्पादन वृद्धि मूल्य कारण
खपत घटेपछि अण्डाको मूल्य सस्तियो, प्रतिगोटा रु. १०.५ मात्रै, लागतभन्दा सस्तोमा…
अण्डा शाहाकारी कि मांशहारी ? यस्तो छ वैज्ञानिकहरुको निष्कर्ष
उदयपुरमा आँपको मूल्यमा दोब्बर वृद्धि